अध्याय ८० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सबै कुरामा, अन्तर्ज्ञान र ज्योति पाउनको लागि व्यक्तिले मसँग वास्तविक सञ्चार गर्नु अत्यावश्यक छ; यसरी मात्रै आत्मा शान्तिमा हुन सक्छ। अन्यथा, आत्मासँग कुनै शान्ति हुनेछैन। अहिले, तिमीहरूबीच रहेको सबैभन्दा गम्‍भीर रोग भनेको मेरो सामान्य मानवतालाई मेरो पूर्ण ईश्‍वरीयताबाट अलग गर्ने कार्य हो; यसको साथै, तिमीहरूमध्ये धेरैजसोले मेरो सामान्य मानवतालाई जोड दिन्छौ, मानौं तिमीहरूलाई मसँग पूर्ण ईश्‍वरीयता पनि छ भन्‍ने कहिल्यै थाहा थिएन। यसले मेरो निन्दा हुन्छ! के तिमीहरूलाई त्यो थाहा छ? तिमीहरूको रोग यति गम्भीर छ कि यदि तिमीहरूले हतार गरेर निको भएनौ भने, मेरो हातद्वारा तिमीहरू मारिनेछौ। मेरो अघि तिमीहरू एक किसिमको व्यवहार गर्छौ (सम्‍मानजनक व्यक्ति; नम्र र धैर्य देखिन्छौ), यद्यपि मेरो पिठ्यूँपछाडि पूर्ण रूपमा फरक व्यवहार गर्छौ (तिमीहरूले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्दै, गुटबन्दी गर्दै, स्वतन्त्र राज्यहरू स्थापना गर्दै, मलाई धोका दिने चाहना गर्दै पूर्ण रूपमा ढोङ्गी, छाडा र नियन्त्रणबाहिरको व्यवहार गर्छौ)। तिमीहरू अन्धा हौ! शैतानले भ्रमित पारेको तेरो आँखा खोल्! म वास्तवमा को हुँ हेर्! तँसँग कुनै लाज छैन! मेरा कार्यहरू आश्‍चर्यजनक छन् भन्‍ने कुरा तँलाई थाहा छैन! मेरो सर्वशक्तिमान्‌ताबारे तिमीहरूलाई थाहा छैन! अहिलेसम्म मुक्ति नपाएको अवस्थामा कसले ख्रीष्‍टको सेवा गर्छ भन्‍न सकिन्छ? तैँले कुन भूमिका खेल्दैछस् भन्‍ने तँलाई थाहा छैन! वास्तवमा तँ मेरो सामुन्ने भेस बदलेर आफ्‍नो आकर्षक रूप देखाउँदै आउँछस्—नीच मानिस! म तँलाई मेरो घरबाट निकाल्‍नेछु; म यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दिनँ, किनभने मैले तिनीहरूलाई न त पूर्वनिर्धारित न त छनौट नै गरेको छु।
म जे भन्छु त्यही गर्छु। दुष्ट काम गर्नेहरू डराउनै पर्दैन; म कुनै पनि व्यक्तिलाई गलत गर्दिनँ। म सधैँ मेरो योजनाअनुसार कार्य गर्छु र मेरो धार्मिकताअनुसार काम-कुरा गर्छु। दुष्ट काम गर्नेहरू सृष्टिदेखि नै शैतानका सन्तान रहिआएका हुनाले, मैले तिनीहरूलाई चुनिनँ; “पहाड-पर्वत र नदीनाला स्थानान्तर र रूपान्तर हुने भए पनि, व्यक्तिको प्रकृति परिवर्तन हुनेछैन” भन्‍ने भनाइको अर्थ यही हो। मानवजातिले बुझ्‍न नसक्‍ने विषयहरूमा, सबै कुरा स्पष्ट पारिएको छ र ममा कुनै कुरा लुकेको छैन। तैँले थोरै मानिसहरूको नजरबाट केही कुरा लुकाउन सक्छस् होला र निकै मानिसहरूको भरोसा पनि जित्‍न सक्छस् होला, तर मसँग यसो गर्नु सजिलो छैन। अन्तिममा, तँ मेरो न्यायबाट उम्कन सक्दैनस्। मानवजातिको दृष्टि सीमित छ र वर्तमान परिस्थितिको सानो अंश बुझ्‍न सक्‍नेहरूलाई समेत केही सीप भएका व्यक्तिको रूपमा गन्ती गरिन्छ। मेरो लागि, सबै कुरा सहजताको साथ अघि बढ्छ र मेरो बाटोमा कुनै कुरा अलिकति पनि बाधा बन्दैन, किनभने सबै कुरा मेरै नियन्त्रण र बन्दोबस्तमा छन्। मेरो नियन्त्रणमा समर्पित नहुने आँट कसले गर्नेथियो र! मेरो व्यवस्थापनलाई बाधा दिने आँट कसले गर्नेथियो र! मप्रति बफादार वा कर्तव्यनिष्ठ नहुने कसले आँट गर्नेथियो र! कसले मलाई सत्य नरहेको कुरा, र मलाई झूटहरू बताउने आँट कसले गर्नेथियो र! तिनीहरूमध्ये कोही पनि मेरो क्रोधपूर्ण हातबाट उम्कनेछैनन्। तैँले अहिले हार स्वीकार गरेको र तँ सजाय पाउन अनि अतल कुण्‍डमा प्रवेश गर्न इच्छुक भए तापनि म तँलाई अझै पनि सहजै छोड्नेछैन। तँ फेरि पनि मेरो क्रोधपूर्ण दण्डमा (चरम घृणा) पर् भनी मैले तँलाई अतल कुण्‍डबाट फर्काउनैपर्छ। तँ भागेर जान सक्‍ने कुनै ठाउँ छ? मेरो सामान्य मानवतालाई मेरो पूर्ण ईश्‍वरीयताबाट अलग गर्ने मानिसहरूको कार्यलाई नै म सबैभन्दा बढी घृणा गर्छु।
मप्रति निष्ठावान हुनेहरू धन्य छन्; अर्थात्, मलाई नजिकबाट मानव हृदय जाँच्ने परमेश्‍वर स्‍वयम्‌को रूपमा साँचो रूपमा पहिचान गर्नेहरू धन्य छन्। म अवश्य नै तेरा आशिष्‌हरूको गुणानात्मक वृद्धि गर्नेछु, यसरी तैँले मेरो राज्यका असल आशिष्‌हरू सदासर्वदा नै उपभोग गर्न सक्छस्। शैतानलाई लाजमा पार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका यो पनि हो। तैपनि, अत्यन्तै अधीर वा व्याकुल नबन्; म सबै कुराको लागि समय तोक्छु। यदि मैले पूर्वनिर्धारित गरेको समय अहिलेसम्‍म आइसकेको छैन भने, एक सेकेन्डअघि समेत म काम गर्नेछैन। म ठीक-ठीक र तालमा काम गर्छु; म कारणविना काम गर्दिनँ। मानव दृष्टिकोणबाट हेर्दा, म चिन्ताले ग्रसित हुँदै हुँदिनँ; म ताइ पर्वतजस्तै स्थिर छु—तर के म सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुँ भन्‍ने कुरा तँलाई थाहा छैन? अत्यन्तै अधीर नबन्; सबै कुरा मेरै हातमा छन्। सबै कुरा धेरै पहिले नै तयार गरिएको छ र हरेक कुरा मेरो लागि सेवा गर्न आतुर छन्। बाहिरबाट हेर्दा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अस्तव्यस्त देखिन्छ तर मेरो दृष्टिकोणमा, सबै कुरा सुव्यवस्थित छ। मैले तिमीहरूको लागि जे तयार गरेको छु त्यो तिमीहरूको आनन्दको लागि मात्रै हो। के तिमीहरूलाई यो थाहा छ? आफैलाई मेरो व्यवस्थापनमा प्रवेश नगराऊ। म मेरा कार्यहरूद्वारा सबै मानिसहरू र सबै राष्ट्रहरूलाई मेरो सर्वशक्ति हेर्न लगाउनेछु र मेरा अचम्‍मका कार्यहरूका निम्ति तिनीहरूलाई मेरो पवित्र नामको महिमा र प्रशंसा गाउन लगाउनेछु। किनभने मैले भने झैँ, मैले गर्ने कुनै पनि काम आधारहीन हुँदैन; बरु, सबै कुरा मेरो बुद्धि र शक्तिले, मेरो धार्मिकता र प्रतापले, अनि अझ बढी भन्दा, मेरो क्रोधले भरिएको हुन्छ।
मेरा वचनहरू सुन्‍नेबित्तिकै बिउँझनेहरूले अवश्य नै मेरा आशिष्‌हरू प्राप्त गर्नेछन् र अवश्य नै मबाट सुरक्षा र देखभाल प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरूले सजायको पीडा अनुभव गर्नेछैनन्; बरु, तिनीहरूले परिवारको खुसी प्राप्त गर्नेछन्। के तिमीहरूलाई यो कुरा थाहा छ? पीडा अनन्त हुन्छ र आनन्द त झनै अनन्त हुन्छ; अबदेखि ती दुवैको अनुभव गरिनेछ। तैँले पीडा भोग्छस् कि आनन्द अनुभव गर्छस् भन्‍ने कुरा तैँले आफ्‍नो पाप कस्तो मनोवृत्तिले स्वीकार्छस् त्यसैमा भर पर्छ। तँ मैले पूर्वनिर्धारित गरेको र चुनेको व्यक्ति होस् कि होइनस् भन्‍ने कुराको हकमा भने, तैँले जे भनेको छस् त्यसको आधारमा तँ यसबारे निश्‍चित हुनुपर्छ। तैँले मानिसहरूलाई मूर्ख तुल्याउन सक्छस् तर मलाई सक्दैनस्। मैले पूर्वनिर्धारित गरेका र चुनेकाहरूलाई अबदेखि प्रशस्त आशिष्‌ दिन थालिनेछ; मैले पूर्वनिर्धारित नगरेका र नचुनेकाहरूका हकमा भने, म अबदेखि तिनीहरूलाई कठोर सजाय दिनेछु। यो तिमीहरूलाई मेरो प्रमाण हुनेछ। अहिले आशिष्‌ पाउनेहरू अवश्य नै मेरा प्रियहरू हुन्; जहाँसम्‍म सजाय पाउनेहरूको कुरा छ, अवश्य नै तिनीहरूलाई मैले पूर्वनिर्धारित गरेको र चुनेको छैन। यस कुरामा तिमीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ! भन्‍नुको अर्थ, यदि तैँले अहिले पाउने कुरा भनेको मबाट तेरो निराकरण हुनु मात्र हो भने र यदि तैँले मेरो कठोर न्यायका वचनहरू प्राप्त गर्छस् भने, तँलाई मेरो हृदयले घृणा गर्छ र घिनाउँछ अनि तँ मैले पन्छाउनेहरूमध्येको एक हुनेछस्। यदि तैँले मेरो सान्त्वना र जीवन सम्‍बन्धी प्रावधान प्राप्त गर्छस् भने, तँ मेरो स्वामित्वमा छस्; तँ मेरा प्रियहरूमध्येको एक होस्। तैँले मेरो बाहिरी रूप हेरेर यो कुरा निर्धारण गर्न सक्दैनस्। यस विषयमा आफ्नो दिमाग नखिया!
मेरा वचनहरूले हरेक व्यक्तिको वास्तविक अवस्थाबारे बताउँछन्। के तिमीहरूलाई म जुन पायो त्यही विषयमा कुरा गर्छु वा मलाई जे मन लाग्छ म त्यही भन्छु भन्‍ने लाग्छ? अवश्य त्यस्तो होइन! मेरो हरेक वचनमा मेरो बुद्धि लुकेको हुन्छ। तिमीहरूले मेरा वचनहरूलाई सत्यताको रूपमा स्वीकार मात्रै गर्नुपर्छ। अत्यन्तै छोटो समयमा, साँचो मार्ग खोज्ने विदेशीहरू आइपुग्‍नेछन्। जब त्यसो हुन्छ, तिमीहरू अक्क न बक्‍क हुनेछौ र सबै कुरा कुनै कठिनाइबिना नै पूरा हुनेछ। म सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर हुँ भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? मेरा यी वचनहरू सुनेपछि, तिमीहरूले दृढ्तापूर्वक त्यसमा विश्‍वास गर्छौ, होइन र? म कुनै गल्ती गर्दिनँ, गलत अभिव्यक्तिहरू बोल्‍ने कुरा त परै जाओस्। के तिमीहरूलाई यो कुरा थाहा छ? त्यसकारण, तिनीहरूलाई अगुवाइ गर्न र तिनीहरूको गोठालो गर्न तिमीहरूले तुरुन्तै मेरो तालिम स्वीकार गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरालाई मैले बारम्बार जोर दिएको छु। के तिमीहरूलाई यो कुरा थाहा छ? तिमीहरूमार्फत म तिनीहरूलाई सिद्ध तुल्याउनेछु। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, तिमीहरूमार्फत म मेरा ठूला-ठूला चिन्‍ह र चमत्कारहरू प्रकट गर्नेछु; अर्थात्, मानवजातिले नीच ठानेका मानिसहरूका बीचबाट मैले मलाई प्रकट गर्न, मेरो नाउँलाई महिमित तुल्याउन, मेरो लागि सबै कुरा सम्हाल्न र मसँग राजाहरूका रूपमा शासन गर्नको निम्ति मानिसहरूको एउटा समूहलाई चुनेको छु। तसर्थ, मैले अहिले तिमीहरूलाई दिने तालिम संसारको सबैभन्‍दा ठूलो व्यवस्थापन हो; यो मानवजातिले पूरा गर्न नसक्‍ने अचम्‍मको कुरा हो। तिमीहरूलाई सिद्ध तुल्याउने कार्यद्वारा, म शैतानलाई आगो र गन्धकको कुण्ड अनि अतल कुण्‍डमा फ्याँक्‍नेछु, ठूलो रातो अजिङ्गरलाई फेरि कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी मृत्युमा खसालिदिनेछु। त्यसकारण, अतल कुण्‍डमा फ्याँकिने सबै जना ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तान हुन्। म तिनीहरूलाई चरम घृणा गर्छु। यो कुरा मैले ल्याएको छु। के तिमीहरू देख्‍न सक्दैनौ? बेइमान र कुटिल र छली सबैलाई खुलासा गरिएको छ। घमण्‍डी, अभिमानी, आत्म-धर्मी र धूर्त मानिसहरू प्रधान स्‍वर्गदूतका सन्तान हुन् र तिनीहरू नै ठेट शैतानहरू हुन्—तिनीहरू सबै मेरा कट्टर शत्रु, विरोधीहरू हुन्। मैले आफ्नो हृदयको घृणालाई निभाउन तिनीहरूलाई एक-एक गरी दण्ड दिनैपर्छ। म यो काम एक पटकमा एउटा गरी गर्नेछु, र क्रमैसँग हरेकलाई ठीक गर्नेछु।
अब, आगो र गन्धकको कुण्ड र अतल कुण्ड भनेका वास्तवमा के हुन् त? मानव कल्‍पनाअनुसार, आगो र गन्धकको कुण्ड भौतिक कुरा हो तर यो एकदमै गलत व्याख्या हो भन्‍ने कुरा मानवजातिलाई थाहा छैन। तैपनि, यसले मानिसहरूको मनमस्तिष्कमा निश्‍चित स्थान लिन्छ। आगो र गन्धकको कुण्ड भनेको मानवजातिलाई सजाय दिने मेरो हात हो; ज-जसलाई आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्याँकिन्छ तिनीहरू मेरो हातद्वारा मारिएका हुन्छन्। यी मानिसहरूको आत्मा, प्राण र शरीरले सदासर्वदा कष्ट भोगिरहन्छ। सबै कुरा मेरै हातमा छन् भनेर मैले भनेका वचनहरूको साँचो अर्थ यही हो। त्यसो भए, अतल कुण्डले चाहिँ केलाई जनाउँछ त? मानिसहरूले यो अन्त्यहीन र अथाह गहिरो ठूलो कुण्ड हो भनेर विचार गर्छन्। वास्तविक अतल कुण्ड भनेको शैतानको प्रभाव हो। यदि व्यक्ति शैतानको हातमा पर्छ भने, त्यो व्यक्ति अतल कुण्‍डमा परेको हुन्छ; तिनीहरूमा पखेटा नै उम्रियो भने पनि तिनीहरू उडेर बाहिर निस्कन सक्दैनन्। यही कारणले गर्दा, यसलाई अतल कुण्ड भनिएको हो। त्यस्ता मानिसहरू अनन्त सजायको भागीदार हुनेछन्; यही तरिकामा मैले यसलाई प्रबन्ध गरेको छु।
अघिल्लो: अध्याय ७९
अर्को: अध्याय ८१